Warshadda jiinyeerka ee 'JINGJIANG County SHENHU HUALIAN'
Warshadda Waxyaabaha Qalabka ee JINGJIANG GUANHUA ayaa la aasaasay;
JINGJIANG SBS Birta Die ridaya Co., Ltd. la aasaasay;
JINGJIANG SBS Sax Qaab Co., Ltd. la aasaasay;
JINGJIANG SBS jiinyeer Manufacturing Co., Ltd. la aasaasay;
Shanghai SBS jiinyeer Manufacturing Co., Ltd. la aasaasay;
Xarunta Shiinaha ee loo yaqaan 'Zipper Center' ayaa degtay SBS;
Waxaa la aasaasay SBS Zipper Academy;
SIBO Bacaha & Qalabka Tayada Qalabka CO., LTD. JINIANG waxaa la aasaasay;
SIBO waxay bilawday cilmi baaris madaxbanaan iyo horumarin iyo soo saarida alaabooyinka firaaqada ee banaanka;
SIBO waxay hirgalisay aqoon isweydaarsi wax soo saar boodh la'aan ah oo loogu talagalay bacaha biyaha iyo dhalooyinka biyaha;
SIBO aasaasay isweydaarsi Carro-free madax bannaan-soo-saarka, waayo coolers biyuhu;
● Dambiisha Sibo & Shandadaha Fittings Co., Ltd. Jinjang, oo ah shirkad hoosaad madaxbanaan oo ka tirsan SBS Group, oo la aasaasay 2002.
● Waxaa naga go'an ilaalinta deegaanka, ujeedkeena hore waa inaan ku siino alaabada isboorti ee banaanka.
● Bilowga aasaasidda, waxaan inta badan siinnaa suumanka boorsooyinka, xargaha kabaha, dharka, iyo alaabada taxanaha ah.
● Markii ay sii xoogeysanayeen macaamiisha iyo suuqa, sanadkii 2003 waxaan bilownay in aan horumarino oo aan soo saarno isboortiga banaanka & alaabada wakhtiga firaaqada ah kaligeen. Sida dhalooyinka biyaha iyo kaadiheysta kaadiheysta taxanaha ah.
● waxaan leenahay aqoon isweydaarsi boodh-la'aan u gaar ah oo loogu talagalay dhalada biyaha, kaadi haysta, iyo qaboojiye jilicsan si aan u siino macaamiisha xulashooyin badan iyo adeegyo kala duwan.
● Waxaa naga go'an suuqyada Yurub iyo Mareykanka wax soo saarkana waxaa loo iibgeeyaa dalal badan. Wax soosaarka SBS Sibo waxay caan ku yihiin macaamiisha adduunka waxayna abuuraan iskaashi muddo dheer ah in kabadan 30well caan ku ah ereyga.
● Waxaan leenahay waaxdeena gaarka ah ee R&D si aan kuu siino adeegyo habeyn wax soo saar. Waxa kale oo jira shaybaarro heer-qaran ah, oo dhammaan alaabooyinka ay ku jiraan alaabta ceeriin la tijaabiyey. Isla mar ahaantaana, waxaa lagu qalabeeyaa waax tayo leh, iyo badeecadaha dhammaaday waxaa hubiya waaxda tayada.
● Dhammaan alaabooyinka shirkadda waxay dhaafeen shuruudihii ugu dambeeyay ee caalamiga ah ee ilaalinta deegaanka sida Midowga Yurub iyo heer caalami. Sida EN71, FDA, LFGB, BPA, 6P, PAHS iyo qaar kale oo shahaado deegaanka ah.
# Soo saaraha xirfadlaha ah ee kaadiheysta fuuq-celinta cayaaraha
In ka badan 10 sano ayaa khibrad u leh sameynta kaadiheysta kaadiheysta.
Haysashada waxyaabo badan oo shatiyada ah.
Si adag u xakamaynta alaabta ceyriinka ah ee iibsashada iyada oo loo dammaanad qaadayo in alaabtu ay la kulmi karto heerka FDA.
La kulan FDA, EN71-3 mana laha anthranilate wax soo saarka iyo wixii la mid ah.
# Soo saaraha xirfadlaha ah ee qaboojiyaha
Nadiifi aqoon-isweydaarsiga soo-saarka qaboojiyaha
Kooxda farsamada xirfadeed
Xirfadaha hawlgalka oo xirfad leh
Macaamiil kastaa ha la kulmo quruxda faahfaahinta iyo qaababka gaarka ah ee alaabtayada.
# Teknolojiyada R & D furitaanka caaryada
Marka loo eego qaababka astaanta macaamiisha, alaabooyinka la gaaryeelay iyo xalalka isku dhafan ee macaamiisha ku wajahan ayaa la bixin doonaa.
Waxaan haynaa nidaam R&D kaamil ah sidoo kale waxaan awood u leenahay inaan fikradahaaga hal abuurka ah uga dhigno alaab wanaagsan
# Sheybaar Xirfad Leh
La kulan Badeecadaha Cagaaran ee ROHS oo buuxiya shuruudaha warbixinta imtixaanka,
La kulan EN71-3 istaandarka cusub ee yurubiyanka ah. Maya wax anthranilate ah, oo la kulan heerka Yurub ee REACH
Siyaasadda tayada iyo deegaanka: oo salka ku haysa baahida macaamiisha; qaadashada horumar waara;
raacdo tayo sare leh; adeecida sharciyada iyo qawaaniinta;
fulinta wax soosaarka Caatada iyo dhismaha warshad cagaaran.
Samee sida ugu fiican, noqo kuwa ugu horeeya! "Waa aragtida ganacsi ee SBS.
Shirkadda SIBO waxay si joogto ah u horumarin doontaa awoodda maaraynta firfircoonaanta;
in lagu koobo baahiyaha suuqyada adduunka si loo helo wax soo saar aad iyo aad u wanaagsan
iyo adeegyada loogu talagalay macaamiisheenna bartilmaameedka tayada ku habboon. Aynu is adkeynno oo aan abuurno mustaqbal wanaagsan!